Fantaro mandritra ny fijanonana ao an-trano ny hatsarantarehy sy ny lova any Filipina, Vietnam ary Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Fantaro mandritra ny fijanonana ao an-trano ny hatsarantarehy sy ny lova any Filipina, Vietnam ary Thailandy
Andra-tsira hisarihana mpizahatany rahatrizay ny tolotra virtoaly.
Voadika ny 29 Jona 2020 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, Español, українська, English
Pikantsary tao amin'ny tranonkalan'ny Departemantan'ny Fizahantany any Filipina.
Nanafoana ny fitsangatsanganana ary nanimba ny indostrian'ny fizahantany rehetra ny famerana ny fivezivezena manerana an'izao tontolo izao vokatry ny COVID-19.
Any Azia Atsimo Atsinanana, izay manana ny anjara toerana lehibe amin'ny famoronana asa sy fidiram-bola ny fizahantany, dia efa nampitotongana ny toekaren'ny firenena maro ny valanaretina. Bitika ny (azo tamin'ny) fizahantany tamin'ny fotoana izay tokony niroboroboany.
Nitatitra ny Departemanta misahana ny Fizahantany ao Filipina fa nihena ho 54 isan-jato mahery na 1.32 tapitrisa ireo vahiny tonga nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Aprily tamin'ity taona ity. 12,7 isan-jaton'ny harinkarena anatiny tamin'ny taona 2018 ny sehatry ny fizahantany .
Araka ny tatitra nataon'ny Birao Foiben'ny Antonanisa, nandray mpizahantany iraisam-pirenena miisa 3,7 tapitrisa nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Martsa i Vietnam , izay latsaka 18,1 isan-jato raha oharina tamin'ny vanim-potoana tamin'ny taona 2019.
Nilaza ny manampahefana Thailandey fa nihena ho 6,6 tapitrisa na 38 isanjato ny fahatongavan'ireo mpizahatany vahiny nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa. Mitentina 11 isanjaton'ny harinkarena anatiny tamin'ny taona 2019 ny fandanian'ireo mpizahatany vahiny.
Ho setrin'izany, nanatontosa fitetezantany virtoaly ny fanjakana tany amin'ireny firenena ireny ho an'ireo izay maniry ny hahita toerana fitsangatsanganana malaza any Azia Atsimo Atsinanana kanefa sady tsy miala ao an-tranony ary mandrisika ireo mpizahatany hitsidika ireo toerana ireo amin'ny hoavy.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo tolotra fandratoana dia an-tserasera maimaimpoana.
Niara-niasa tamin'ny Google Arts and Culture ny Fitantanana Intramuros (IA), masoivohom-panjakana ao Filipina tamin'ny famoronana sehatra ahafahan'ny mpisera mitsidika ny ‘tanàndehibe voaaro’ any Intramuros, Manila amin'ny fomba virtoaly.
Intramuros no toeran'ny renivohitra fahiny nandritra ny 300 taona nitondran'i Espaina an'i Filipina. Afaka mahita toerana manan-tantara ny Fort Santiago sy Plaza Roma ireo mpitsidika.
Manao fampirantiana ao amin'ny @Google Arts and Culture ny sampan'ny Fitantanana Intramuros mitovy aminay.
Manolotra ny fanangonana zavakanton'ny IA ihany koa ny tranokala. Mampiseho ny sarin'i Jesoa Zaza ny fampirantiana an-tserasera ‘Christ in Filipino Consciousness’ ary maneho taratra ny fomba nampiasana ny Kristianisma hanjanahana an'i Filipina.
Mandritra izany fotoana izany, manolotra sarin-tanàna virtoaly izay ahitana ireo toeram-pizahantany malaza any Filipina ary azon'ny mpisera aseho amin'ny famelabelaran-kevitra an-dahatsary ny Departemantan'ny Fizahantany.
Pikantsarin'ny Helodrano Ha Long tazanina amin'ny endriny 360 degre. Loharano: tranonkalan'ny ‘Mijanona ao an-trano miaraka amin'i Vietnam’
Nanomboka ny fonosana tokana ‘Mijanona ao an-trano miaraka amin'i Vietnam’ ny Biraon'ny Mpanolontsain'ny Fizahantany any Vietnam sy ny Sampan-draharahan'ny Fizahantany Nasionaly any Vietnam mba ahafahan'ny mpitsidika hanavatsava ny firenena avy lavitra.
Manolotra ny fitsidihana ny Vakoka Manerantany UNESCO miisa valo amin'ny endriny 360 degre ny tranonkala, anisan'izany ny Helodrano Halong sy ireo lava-bato Phong Nha.
Afaka mitroka ny fomba fanamboarana sakafo Vietnamiana malaza toy ny mofo bánh mi sy ny bun cha (paty vita amin'ny vary aroso miaraka amin'ny hena baolina kisoa natono) ny mpitsidika.
Manasongadina ny olom-pirenena any an-toerana manome toro-hevitra sy fomba fijery miavaka momba ny toeram-pitsidihana Vietnamianina sasany ny lahatsary fohy maromaro.
Misy bokikely miloko iray mampiseho kisary manan-tantara malaza Vietnamiana azo alaina an-tserasera.
Farany, afaka mitroka ny sarin'ny toeram-pizahantany malaza izay azo ampiasaina ho sary virtoaly mandritra ny antso an-dahatsary ny mpitsidika .
Vao haingana i Thailandy no nanalefaka ny famerana ny fihibohana saingy nila fotoana ela indray vao tongasoa indray ireo mpizahatany iraisam-pirenena.
Niezaka nihazona ny fahalianana tamin'ny alàlan'ny fanentanana #BooknowTravelsoon (Fandriho ny Dianao) sy ny fanentanana tao amin'ny tambajotra sosialy Amazing Thainess (Thailandy Mampitolagaga) ny Tompon'andraikitry ny Fizahantany any Thailandy (TAT).
Natombok'izy ireo ny fitsangatsanganana virtoaly 3D ho an'ny toerana miisa 13 natao any amin'ireo faritany miisa sivy.
Iray amin'ireo mozea virtoaly manolotra topi-maso momba ny harenan'ny firenena ny Mozean'ny Zavakanton'ny Mpanjaka izay ahitana ny rakitra taokanton'ny mpanao asa tanana avy ao amin'ny Ivontoeran'ny Mpanjakavavy Sirikit.
Ahitana ny “Modelin'ny Sambon'ny Mpanjaka Mongkol Suban” sy ny “vazy miendrika atody miaraka amin'ny sarony volamena amin'ny modely Khankorbua” ireo angodrakitry ny ravaka sarobidy nalefa tao amin'ny tambajotra sosialy.
Modelin'ny Sambon'ny Mpanjaka Mongkol, anisan'izany ny vata-tsambo sy ny andrin-tsambo, vita amin'ny volafotsy nofonosina volamena. Vita amin'ny sokitra volamena sy miloko vernia amin'ny endriny Garuda mifikitra amin'ny bibilava Naga ao anatin'ny andry tsirairay ny anoloan'ny sambo.
Vazy miendrika atody miaraka amin'ny sarony volamena amin'ny modely Khankorbua
Savaivo: 5.8 sm
Haavo 12,0 sm
Ny isan'ny mpanao asa tanana: 7
Fotoana namokarana: 70 andro
6 andro izayJapana